Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanonganam-panjakana : Niditra an-tsehatra i Papa François
Fanonganam-panjakana : Niditra an-tsehatra i Papa François
Araka ny loharanom-baovao azo dia fantatra izao fa ny Papa François izay filohan’ny fiangonana katolika Rômanina maneran-tary no naniraka ny filoham-piangonana katolika eto Madagasikara(Ekar) ny kardinaly Désiré Tsarahazana, ny evekan’i Morondava Mr Marie Fabien Raharilam-
boniaina, ary ny sekretera jeneralin’ny fiombonamben’ny eveka Mr Jean Claude Randrianarisoa, ny alakamisy faha 29 jolay 2021 teo, teny amin’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena Malagasy, teny amin’ny lapan’ Iavoloha. Mahakasika ny fikasana hifofo ny ain’ny filoham-pirenena ny faha 21 jolay 2021 teo no isan’ny nahatongavana amin’izany, ary koa ny mahakasika ny antony nanaovana fanadihadiana ny evekan’Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona. Ity farany izay nanaovana fanadihadiana manokana teny amin’ny fonenany teny Andohalony alakamisy maraina.
Raha ny loharanom-baovao hatrany dia nanambara ny kardinaly fa tsy manao politika ny Ekar, ary nanameloka ny famonoana olona sy ny fikasana hamono ny filoham-pirenena izy ireo.Ny loharanom-baovao faha avy ao an-dapa no nanambara fa nisy ny hafatri’i Papa François noho izao raharaha mahavoatonontonona ny relijiozy izao.
Iarahana mahalala fa ny fanjakana tsy tohanan’ny katôlika sy ialany dia sahirana manerana ny tany, ary tonga hatrany amin’ny faharavana izany. Na tsy manao politika aza ny fiangonana katôlika dia misy akony ara-politika ny fihetsik’izy ireo na izay lazainy.
Raha vao miresaka katôlika amin’ny raharaham-pirenena sy ny politika dia tsy maintsy miresaka an’i Raoma sy Vatikan izay misy an’i Papa. I Papa izay sady filoham-piangonana ary filoham-panjakana ihany koa. I Vatikan sy Raoma dia tsy afa misaraka amin’ny firenena Italianina sy Frantsay hatramin’izay ara-politika. Izany no tontolo politika na “geo-politique” ka tsy azo odiana tsy ho hita fa manana ny toerany lehibe.
Ny mpanaraka ny raharaha politika moa dia samy manana ny fandikany iny fihaonana nisy teo amin’ny katôlika sy ny kardinaly Désiré Tsarahazana sy ny namany iny , ary ny fanaovana fanadihadiana an’I Odon Razanakolona izao. Ho hitan-tsika ny tohiny.